नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : मिलेर बसेका नेपाली भाँड्ने काम कसरी भैरहेको छ ? हुँदैछ ? भन्ने कुरा जान्न यो पनि हेर्नुस । यस्ता दुस्ट आत्माहरूलाई चिनौं !
मिलेर बसेका नेपाली भाँड्ने काम कसरी भैरहेको छ ? हुँदैछ ? भन्ने कुरा जान्न यो पनि हेर्नुस । यस्ता दुस्ट आत्माहरूलाई चिनौं !